पढाइमा अब्बल नायिका
[2014-05-13 오후 9:18:00]
नेपालका चलचित्र अभिनेत्रीहरूको शैक्षिक योग्यता कतिकति होला? बेलाबेलामा यसबारे चर्चा हुने गर्छ। कतिपयले स्नातकसम्म पढेका छन् भने कतिपयले एसएलसीसमेत उत्तीर्ण गरेका छैनन्। यसबारे धेरैलाई थाहा छ। तर, नेपालमा एकजना पढाइमा अब्बल अभिनेत्री पनि छिन्, त्योचाहिँ धेरैलाई थाहा छैन।
हो, भर्खरै रिलिज भएको लिम्बू संस्कृतिमा आधारित अलग धारको चलचित्र 'लाटो पहाड'की नायिका प्रवीण पन्दाक एमबीएसमा छात्रातर्फ विश्वविद्यालय प्रथम हुन्। उनी पढाइमा कति अथक् छिन् भने उनले व्यवस्थापन विषयमा स्नातक उत्तीर्ण गर्नेबित्तिकै कानुन अध्ययनका लागि एलएलबीमा नाम लेखाइन्। छात्रातर्फ विश्वविद्यालय प्रथमको हैसियतसहित एमबीएस उत्तीर्ण गर्दा प्रवीणको हातमा एलएलबीको समेत प्रमाणपत्र आइसकेको थियो। अहिले उनी एलएलएमकी विद्यार्थी हुन्। यसरी समानान्तर रूपमा कसरी पढाइ अगाडि बढाउन सकिन्छ? अन्नपूर्ण शिक्षाले उनीसमक्ष आइतबार जिज्ञासा पोख्यो। उनले भनिन्, 'म पढाइलाई सामान्य रूपमा लिन्छु, विषयवस्तुमा केन्द्रित हुनुपर्छ, पढ्न गाह्रो छैन।'
'के हो, नेपाल टप गरिदिने?'
'केको टप? को टप? मैले कुरा बुझिनँ।'
'हिजोको गोरखापत्र हेर्नु त।'
कार्यालयमा बसेर फेसबुक खोल्दा अर्को साथीसँग यसरी नै च्याटिङ भइरहेको थियो, प्रवीणको। साथीले सुझाएपछि उनले सरासर गएर अघिल्लो दिनको गोरखापत्र हेरिन्। 'त्यहाँ त व्यवस्थापन संकायमा मेरो नाम देखेँ, छात्रातर्फको एक नम्बरमा', उनी सुनाउँछिन्। त्यहाँ छात्रातर्फको प्रथम स्थानको दाबेदारमा उनको नाम र प्राप्तांक प्रतिशत थियो। र, त्यस सूचनामा भनिएको थियो, 'कसैलाई चित्त बुझेन भने दाबीविरोध गर्न सकिनेछ।'
तर, उनको ७१.७ प्राप्तांक प्रतिशतलाई अन्य छात्राहरूले उछिन्न सकेनन् र उनी ठहरिइन्, मेधावी विद्यार्थी।
जतिखेर शंकरदेव क्याम्पसमा उनी स्नातकोत्तर गरिरहेकी थिइन्, त्यहाँ केही अध्यापकबाट आफूमाथि आन्तरिक परीक्षामा विभेद भएको अनुभूति भएछ उनलाई। आन्तरिक मूल्यांकनमा आफूलाई प्राप्त भएको अंकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनी सरासर आफ्नो प्राप्तांक चढाउने अध्यापककहाँ गइछिन्। ती अध्यापकले भनेछन्, 'लेखेर नम्बर ल्याओ न।'
'त्यसपछि म पनि कस्सिएँ', उनी सम्झन्छिन्, 'त्यसपछि म लेखेरै देखाउँछु भनेर कस्सिएँ, लेखेरै देखाएँ पनि।'
सामान्यत: कलेजले विश्वविद्यालय प्रथमको सम्भावना भएका विद्यार्थीको भविष्य हेरेर शोधग्रन्थमा केही हेरविचार वा साहनुभूति दिने गरेको पाइन्छ। त्यही सम्भावना बोकेकी विद्यार्थीमध्ये एक थिइन्, प्रवीण पनि। तर, उनको शोधग्रन्धमाथि त्यति न्याय गरेको ठान्दिनन् उनी। 'प्रथम हुने सम्भावना भएको विद्यार्थीलाई ९५ नम्बरसम्म दिएको देखिन्छ, नभए ९० नम्बरमाथि त दिइन्छ नै', उनको तर्क छ। तर, उनले भने शोधग्रन्थमा ८३ नम्बरमात्रै दिइएको रहेछ। तर, आन्तरिक परीक्षामा जस्तोसुकै मूल्यांकन भए पनि आखिर उनले परीक्षामा लेखेरै हात पारिन्, छात्रातर्फ प्रथम स्थान।
एउटा लाहुरे परिवारमा जन्मेकी हुन्, प्रवीण। उनको मूल थलो पर्‍यो, ताप्लेजुङको साब्लाखु गाविस। मूल थलोमा कम र केही समय भारत र झापा ओहोरदोहोर गर्दैमा बित्यो उनको बाल्यकाल। अनियमित पढाइलाई नियमित गर्न उनी पुतलीसडकस्थित पद्मोदय माविमा पुगिन्। प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेर उनी कक्षा ८ मा भर्ना भइन्। हुने बिरुवाको चिल्लो पात, उनले सुरुकै वर्ष कक्षा प्रथम बनेर देखाइन्। कक्षा ९ र एसएलसीमा उनले आफ्नो स्थान सुरक्षित गरिन्। २०५४ सालमा उनले विशिष्ट श्रेणीमा एसएलसी उत्तीर्ण गरिन्, सरकारी विद्यालयबाट।
प्लस टु सिद्धार्थ वनस्थली र स्नातक ग्लोबल कलेजबाट सक्दानसक्दै प्रवीण चलचित्र, रेडियोकर्मी र मोडलका रूपमा जम्न थालिसकेकी थिइन्। चलचित्र निर्देशक प्रताप सुब्बाबाट अभिनयमा दीक्षित उनले ठूलो पर्दाको चलचित्र 'बगर', 'शस्त्र'मा अभिनय गर्न भ्याइसकेकी थिइन् भने 'मर्दीको किनारमा', 'वचन', 'नारी', 'कुसुम'जस्ता टेलिशृंखलाहरू र केही म्युजिक भिडियोमा आफ्नो दक्षता देखाइसकेकी थिइन्।
दुई दाजु विशाल र विश्‍वको छत्रछायामा काठमाडौंमा हुर्केकी प्रवीणलाई दाजुहरूले नै पढाइमा हौस्याइरहे। केही अप्ठ्यारा कुरा लेखेर र पढेर घोक्ने उनमा सामान्यत: कक्षाकोठामै शिक्षकले पढाएको बेला ध्यान दिएर सुन्ने बानी थियो।नेपाली विषयका केही शब्दका अर्थहरू घोक्नैपर्ने हुन्थ्यो उनलाई। गणित त उनको प्रिय विषय प:यो। 'गणितमा म आफू अ यास त गर्थें नै', उनी भन्छिन्, 'साथीहरूलाई पनि सिकाइदिन्थेँ'
प्रवीणकै भनाइअनुसार स्नातक तहमा पढिरहेको बेला उनको पढाइ अलि खस्केको थियो। राम्रो प्रतिशत ल्याएर उत्तीर्ण हुँदै गरेकी उनको पढाइ स्नातक तहमा प्राप्तांक प्रतिशत घटेर ५३ मा झर्‍यो। पहिलो र दोस्रो वर्षमा उनको यस्तो प्राप्तांक प्रतिशत देखेपछि ग्लोबल कलेजका अध्यापक रेवन दाहालले उनलाई गाली गरेछन्।यस्तो गाली आएपछि उनले आफ्नो पढाइ खस्केको अनुभूति गरिन्। यस्तो अनुभूतिले उनको पढाइले थप गति लियो। तेस्रो वर्षमा उनले ल्याइन्, ७६ प्रतिशत। 'बीबीएसमा यो प्रतिशत ल्याउनु ठट्टा थिएन', उनी भन्छिन्।
उनका अभिभावकले उनलाई एमबीए पढाउन खोजेका थिए। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एमबीएको पाठ्यक्रममा कर्पोरेट ल भेटिनन्। त्यही कर्पोरेट ल पढ्न उनले एलएलबीमा नाम लेखाइन्। शंकरदेव र नेपाल ल क्याम्पसमा समानान्तर रूपमा पढाइ अगाडि बढाएकी उनले एमबीएस र एलएलबीको पढाइमा सफलता हात पारिन्। अहिले एलएलएम अध्ययन गरिरहेकी छन्।
पढाइ र परीक्षाकै कारण उनले दुईवटा चलचित्रमा अभिनय गर्न याइनन्। 'दुईवटा चलचित्रको अफर आएको थियो, परीक्षाको कारण भ्याइनँ', उनी भन्छिन्। उनी आफू अभिनीत चलचित्र 'लाटो पहाड'को प्रवर्द्धनमा झापा जाने तयारीमा छिन्। प्रवीणको मेधावी पढाइले पुष्टि गर्छ, नेपालमा पढेलेखेका नायिका पनि छन्।